Nke a bụ ihe igwe nrụpụta nuklia nke mmadụ rụpụtara na mbụ yiri Akụkọ akụrụngwa
Ikwu maka ulo oru ike nuklia bu ime nke a n’onu okwu di egwu ebe obu na, n’agbanyeghi na anyi nile kwesiri ima banyere ikike ike nke udiri ulo oru a na-enye anyi, kwa, na mkparita uka obula, anyi aghaghi ikwu banyere oke oghom ya. mgbaka. Ihe a niile, metụtara, n'ezie, ihe anyị maara taa, ya bụ, ruo ugbu a anyị ekwuola mgbe niile banyere ụlọ ọrụ nuklia ike dị n'akụkụ ụfọdụ, mgbe niile na ala.
Ugbu a, anyị ga-aga otu nzọụkwụ n'ihu na prototype ị na-ahụ na ihuenyo, nuklia ike osisi baptizim aha ya Akademik Lomonosov nke, dika egosiri ya na aha otu post a, abughi ihe ozo ụlọ ọrụ ike nuklia nke mmadụ rụpụtara na mbụ. Dị ka ị pụrụ ịhụ na onyonyo, ịghọta nke a ntakịrị mma, ihu ọma ihe ị nwere n’iru gị abụghị ihe ọzọ karịa ụlọ ọrụ nuklia nuklia nke e wuru n’obodo Saint Petersburg (Russia) n’enweghị ihe ọ bụla karịa ụgbọ mmiri.
1 Akademik Lomonosov, otu a ka a ga-esi mara mba nuklia nke na-ese n'elu mmiri emela baptizim.
2 Ruo oge ọkọchị nke afọ 2019 ụlọ ọrụ nuklia na-ese n'elu mmiri nke Rọshịa agaghị erute ebe ikpeazụ ya
Akademik Lomonosov, otu a ka a ga-esi mara mba nuklia nke na-ese n'elu mmiri emela baptizim.
Dika ndi nwere oru ngo kwuputara na nke puru iche na ike nuklia a di egwu, o doro anya na anyi na ekwu okwu banyere uzo nke eji ihe ozo di ala. abụọ na-emepụta ihe nuklia KLT-40S ya na ikike inye ruo 70 MW nke ike eletriki na ike ọkụ nke 50 Gcal / h. Ebumnuche ya bụ ịmepụta ọkụ eletrik na okpomọkụ n'ime ime obodo yana obodo dị mkpa nke Pevek, nke dị n'akụkụ Osimiri East Siberia.
Dịka nkọwa, na ọkwa nke ụlọ ọrụ ike nuklia n'onwe ya, gwa gị nke a n'ụzọ dị ịtụnanya akwadebebeghị ihe ọ bụla, ya bu, n’ezie enweghi igwe nke eji esi n’otu ebe gaa ebe ozo ya mere, n’oge obula, otutu ugbo gha aghaghari ya. Na nke a anyị ga-agbakwunye na, n'oge ọrụ ọnọdụ, ọ nweghị ụdị mmanụ nuklia ọ bụla, yabụ ọ kwụsịrị kpamkpam. Ihe kpatara eji ebu ya n’enweghi mmanu na-azaghachi na ngagharị iwe sitere na mba dị iche iche ebe ọ bụ na, iru Pevek, ọ ga-agafe mmiri Sweden, Finland na Norway.
Ruo oge ọkọchị nke afọ 2019 ụlọ ọrụ nuklia na-ese n'elu mmiri nke Rọshịa agaghị erute ebe ikpeazụ ya
Iji ghọta nke ọma ntakịrị njem nke ụlọ ọrụ nuklia ga-atachi obi tupu ya eruo ebe m na-aga, ahapụrụ m gị n'elu usoro ndị a ebe ị ga-ahụ ebe njedebe na ebe Saint Petersburg dị, obodo ebe ọ malitere. . Dịka nkọwa, gwa gị nke ahụ a na-atụ anya na ụlọ ọrụ ike nuklia na-ese n'elu mmiri ga-abata na Pevek n'oge ọkọchị nke 2019, n’oge nke njem nke ihe karịrị otu afọ ga-ejedebe n’ụzọ nkịtị, nke ọ gbara gburugburu mpaghara Europe na Russia site n’akụkụ ugwu ya.
Ozugbo ụlọ ọrụ nuklia ruru ọdụ ụgbọ mmiri nke Murmansk, a ga-ebuju ya mmanụ mmanụ nuklia nke ga - abụ nke mechara nweta ya ịmalite ọrụ. N'oge a, usoro nuklia a pụrụ iche na nke ọhụụ ga-ahụ maka ije ozi dị ka onye nnọchi maka ụlọ ọrụ ike nuklia Bilibino ochie, nke na-arụ ọrụ kemgbe 1974 na, taa, nwere ike ịnye mpaghara ahụ nwere oke nke 45 MW nke ume. N'aka nke ya, Akademik Lomonosov ga-arụkwa ọrụ dị ka onye nnọchi nke ọkụ ọkụ ọkụ nke Chaunskaya, nke nọ n'ọrụ kemgbe ihe karịrị afọ 70.
Osisi ọhụrụ ahụ na-ese n'elu mmiri kwesịrị inwe ikike inye mmadụ 100.000 ọkụ na ọkụ eletrik.. N'oge a na n'agbanyeghị nnukwu nsogbu nke ụdị ike nuklia nke ụdị a nwere ike ibute, ihe nke mkpokọta nke ndị otu dịka GreenPeace amalitelarị, Russia ekwuputala na ọ na-ezube imepụta nkeji karịa na echiche nke imezu. nye ike n'obodo ndị mepere emepe dị n'ebe ugwu nke mba ahụ.
Ozi ndi ozo: arstechnica
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nke a bụ ihe ụlọ ọrụ nuklia nke mbụ na-ese n'elu mmiri yiri
Amazon ikwughachi ga-abata na Spain na Alexa na-ekwu okwu n'asụsụ Spanish n'oge na-adịghị anya